မောင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးမှ ကိုကို့ကို ချစ်ခဲ့မိတယ်လို့ ရင်ဘတ်ထဲက လူနှစ်ယောက်ကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် - Thadin
[ May 21, 2019 ] ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း…! ဗေဒင်ယတြာ
[ May 21, 2019 ] သောကြာသားသမီးများအတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း…! ဗေဒင်ယတြာ
[ May 21, 2019 ] ကျနော်တို့ အလွယ်တကူသုံးနေတဲ့ တစ်ခါသုံး ဝါးတူ တွေရဲ့အန္တရာယ်…! KNOWLEDGE
[ May 21, 2019 ] နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး (ငြိမ်း) ဦးသိန်းစိန် ဒုလ္လဘရဟန်းခံ…! NEWS
[ May 21, 2019 ] မြမြလိုဘဝမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီလားလို့ တေးရေးဝေကြီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်…! CELEBRITY
HomeCELEBRITYမောင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးမှ ကိုကို့ကို ချစ်ခဲ့မိတယ်လို့ ရင်ဘတ်ထဲက လူနှစ်ယောက်ကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
မောင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးမှ ကိုကို့ကို ချစ်ခဲ့မိတယ်လို့ ရင်ဘတ်ထဲက လူနှစ်ယောက်ကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
August 31, 2018 Admin Kwee CELEBRITY 0
Melody world 2009 ခုနှစ် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ Top-5 ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦးအနေနဲ့ အောင်မြင် လူသိများလာတဲ့ အိုင်ရင်း ဇင်မာမြင့်ဟာ သူမရဲ့ အသံချိုချိုလေးတွေနဲ့ သီချင်းကောင်းလေးကို ဆွဲဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်
“နှလုံးသား အရင်းအနှီး” သီချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ စတင် နေရာယူနိုင်ခဲ့သလို သူမ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကလည်း တကယ့်ကို ရင်တွင်း ခံစားချက်တွေ အပြည့်မို့ ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲ ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
သြဂုတ်လ( ၂၉) ရက်နေ့မှာ သူမ အသက်(၂၈) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို သူမရဲ့ မွေးနေ့ မှာ အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် သူမရဲ့ သီချင်းခွေသစ် ဖြစ်တဲ့ “မာ ” ဆိုတဲ့ တေးစီးရီး Album လေးထွက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီ တေးစီးရီး Album လေးမှာ Pop၊ R&B သီချင်းလေးတွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အမြည်းအနေနဲ့ တင်ဆက်ချပြလိုက်တဲ့ အမိုက်စား တစ်ပုဒ် သီချင်းတစ်ပုဒ် ကတော့ မိန်းခလေး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်
” ရင်ဘတ်ထဲက လူနှစ်ယောက်” လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီသီချင်းလေးမှာတော့ ကိုကို့ကို ချစ်ရင်း မောင့်ကို လွမ်းနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပြီး “သိပ်သိပ်ဆိုးတဲ့ မောင့်ကို စိတ်နာပြီး ကိုကို အချစ်တွေနဲ့ မွေ့လျော်တယ်။ ကိုကို သိပြီး ဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကိုကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုရယ် မောင့်ကို ထားခဲ့ပြီးမှ သိပ်လွမ်းနေမိတော့တယ်။ကိုကိုရယ် မောင့်ကို လမ်းခွဲပြီးမှ ကိုကို့ကို ချစ်ခဲ့မိတယ် ” ဆိုတဲ့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်ပြထားတာမို့ ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲ ရောက်မဲ့ သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်
source: Irene Zin Mar Myint
မောငျနဲ့ လမျးခှဲပွီးမှ ကိုကို့ကို ခဈြခဲ့မိတယျ လို့ ရငျဘတျထဲက လူနှဈယောကျကို ဖှငျ့ခပြွလိုကျတဲ့ အိုငျရငျးဇငျမာမွငျ့
Melody world 2009 ခုနှဈ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲမှာ Top-5 ပွိုငျပှဲဝငျ တဈဦးအနနေဲ့ အောငျမွငျ လူသိမြားလာတဲ့ အိုငျရငျး ဇငျမာမွငျ့ဟာ သူမရဲ့ အသံခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးကို ဆှဲဆောငျနိုငျသူဖွဈပါတယျ
“နှလုံးသား အရငျးအနှီး” သီခငျြးလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ စတငျ နရောယူနိုငျခဲ့သလို သူမ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီခငျြးတှကေလညျး တကယျ့ကို ရငျတှငျး ခံစားခကျြတှေ အပွညျ့မို့ ပရိသတျတှေ ရငျထဲ ရောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ
သွဂုတျလ( ၂၉) ရကျနမှေ့ာ သူမ အသကျ(၂၈) နှဈပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈသလို သူမရဲ့ မှေးနေ့ မှာ အမှတျတရ ဖွဈအောငျ သူမရဲ့ သီခငျြးခှသေဈ ဖွဈတဲ့ “မာ ” ဆိုတဲ့ တေးစီးရီး Album လေးထှကျရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ
ဒီ တေးစီးရီး Album လေးမှာ Pop၊ R&B သီခငျြးလေးတှကေို နားဆငျရမှာ ဖွဈပွီး အမွညျးအနနေဲ့ တငျဆကျခပြွလိုကျတဲ့ အမိုကျစား တဈပုဒျ သီခငျြးတဈပုဒျ ကတော့ မိနျးခလေး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနခေဲ့ပါတယျ
” ရငျဘတျထဲက လူနှဈယောကျ” လို့ အမညျရတဲ့ ဒီသီခငျြးလေးမှာတော့ ကိုကို့ကို ခဈြရငျး မောငျ့ကို လှမျးနတေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအကွောငျးရေးထားတဲ့ သီခငျြးလေးဖွဈပွီး “သိပျသိပျဆိုးတဲ့ မောငျ့ကို စိတျနာပွီး ကိုကို အခဈြတှနေဲ့ မှလြေ့ျောတယျ။ ကိုကို သိပွီး ဂရုစိုကျပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ ကိုကို သိပျခဈြပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုကိုရယျ မောငျ့ကို ထားခဲ့ပွီးမှ သိပျလှမျးနမေိတော့တယျ။ကိုကိုရယျ မောငျ့ကို လမျးခှဲပွီးမှ ကိုကို့ကို ခဈြခဲ့မိတယျ ” ဆိုတဲ့ ဝခှေဲမရဖွဈနတေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ ခံစားခကျြကို ရငျဖှငျ့ပွထားတာမို့ ပရိသတျတှေ ရငျထဲ ရောကျမဲ့ သီခငျြးကောငျးလေး တဈပုဒျဖွဈပါတယျ
ဝတဲ့သူ​တွေ ​သေချာဖတ်​​စေချင်​ပါတယ်​ သင်​တို့ကို ဝိတ်​ချခိုင်း​နေတာက ချစ်​လို့ပါ
သေဆုံးသူ GTI ကျောင်းသား သားဖြစ်သူအတွက် ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဦးမြင့်သိန်းဝင်း
ကြွက်နို့ နှင့် ငါးမျက်စိ လွယ်လွယ်လေး သတ်ကြမယ်
သုတ်ပိုး အားကောင်းစေတဲ့ ထိပ်တန်း အစားအစာများ
July 10, 2018 12
မတူညီတဲ့ နေရာအလိုက် ဝခြင်း (၄)မျိုး
July 12, 2018 2
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက အကြံပေးထားတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးနည်း…
အရေးကြီးတဲ့ ကလေးလူနာတစ်ယောက် ဆေးရုံက ခိုးဆင်းပြေးသွားတဲ့ ဇာတ်ကားဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
August 23, 2018 2
ကဏ္ဍများ Select Category CELEBRITY funny HEALTHY KNOWLEDGE LIFESTYLE NEWS RELATIONSHIP SEX KNOWLEDGE စာပေကဏ္ဍ ထူးဆန်းထွေလာ ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ မိုးလေ၀သ အစားအစာကဏ္ဍ အစားအသောက်ပြုလုပ်နည်း အလှပကဏ္ဍ အားကစားကဏ္ဍ ဗေဒင်ယတြာ ဖြစ်ရပ်မှန် ကြားသိရသမျှ
Users Today : 1317
Users Yesterday : 1787
This Month : 40558
This Year : 235956
Total Users : 594980
Views Today : 6041
Total views : 2732530
သတင်းရပ်ကွက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတစ်ချို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ သတင်း နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို လူအများကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းရပ်ကွက်က ရေးသားဖော်ပြတဲ့ သတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေ မှတစ်ပါး အခြားသတင်းနဲ့ဓါတ်ပုံများဟာ သက်ဆိုင်သူများရဲ့ မူပိုင်သာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
copyright @ Thadinyatkwat